Bridge House-Central Broughty Ferry
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguIan
Wamkelekile kwi-Broughty Ferry.
Ukunikezelwa ligumbi lokulala elikhulu kakhulu kwindawo ezolileyo, enokuhlala lula abantu abayi-2-3 enendawo eninzi eseleyo. Kukho indlu yangasese / igumbi lokuhlambela elahlukileyo elinebhafu ye-jacuzzi. Kukwakho negumbi lokuhlambela langoku elahlukileyo kunye nenye indlu yangasese eyahlukileyo eyenzelwe iindwendwe kuphela. Ibandakanyiwe yi-WIFI ekhawulezayo kunye nezixhobo zokwenza iti kunye nekofu. Ukusetyenziswa kwekhitshi elikhulu kunokuxoxwa.
Kukho igumbi elikhulu lokuhlala elitofotofo elinendawo yokutyela ukuba uyayifuna.
Isikhululo sebhasi kunye nesikhululo sikaloliwe yimizuzu emi-5 ukusuka endlwini kwaye kuthatha imizuzu eyi-10 ngololiwe, imizuzu engama-20 ngemoto kunye nemizuzu engama-30 ngebhasi ukuya kwiiLinki. IKhosi yeGalufa yaseSt Andrews, kunye neKhosi yaNdala, ikumgama wemizuzu engama-30 ngemoto.
Kukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya kwiziko eliphithizelayo le-Broughty Ferry eneendawo ezininzi ze-pubs, iindawo zokutyela, iikhefi, iivenkile kunye nenqaba.
Ndihleli apha iminyaka emininzi kwaye ndiyavuya ukunika naluphi na uncedo nolwazi onokulufuna xa uhlala.
Indlu yam ikwi-Broughty Ferry, yi-500metres ukuya kwisitalato esiphakamileyo kwaye ke igumbi lihle kwaye lizolile. Umgaqo kaloliwe osemantla uhamba ngesikhitshane kwaye indlu nganye ekwisithuba seemitha ezingama-50 ukusuka kwayo inokuva uloliwe ongaqhelekanga edlula. Le ndlu ayifani.
4.84 ·Izimvo eziyi-45
IBroughty Ferry yindawo entle yokuphumla. Kwimizuzu emi-5 yokuhamba kukho iilwandle ezinesanti, iilwandle ezinamatye, iinqaba zembali kunye nezikhumbuzo, kukho iivenkile ezinkulu, ii-pubs ezili-15 ezinye zivulwa kude kube yi-3.30am nayo yonke into ephakathi.
Ndiyafumaneka ukukunceda ngokuhlala kwakho kangangoko ufuna. Nceda uqhagamshelane nje ukuze uxoxe.